China Q235 Inogadziriswa Steel Scaffolding Prop fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Inogadziriswa simbi prop inoshandiswa kutsigira kongiri slab kana danda, ine mapaipi maviri, maviri base ndiro uye prop nut.Chimiro chayo chinoita kuti chigone kugadziriswa kune chero hurefu mukati mehuwandu hwayo.Scaffolding yekuvaka simbi shoring acrow prop ine mhando nhatu, dzinoti Middle East mhando prop, Spanish mhando prop uye Italian mhando prop.Uye zvakare iwe unogona kusarudza iwe musoro, forogo musoro kana T musoro pane base plate.
Inogadziriswa simbi prop ine yakakwirira-yekutakura mitoro uye yakagadzirirwa kutsigira yakachinjika formwork nhengo.Iine tambo inogadziriswa uye slot, zvichiita kuti zvive nyore kuisa, kubvisa uye kugadzirisa chiyero.Izvi zvinobvumira kukurumidza-kumhanya kwekugadzira scaffolding.Chikamu chacho chinogadzirwa nemarara kana kupendwa kudzivirira ngura.
1) Zvinhu: Q195, Q235, Q345, sezvinodiwa nemutengi
4) Rudzi: Middle East kana Spanish mhando, Italian mhando, Spanish mhando
5) Saizi: sezvinodiwa nemutengi
1) Steel prop inonyanya kugadzirwa neplate yepasi, yekunze chubhu, yemukati chubhu, sleeve & nut pin, top & pasi ndiro uye zvishongedzo zvekupeta tripod, head jack.Chimiro chacho chiri nyore uye chinoshanduka.
2) Chimiro chesimbi prop chiri nyore, saka zviri nyore kuunganidza uye kupatsanura.
3) Iyo yemukati chubhu inogona kuwedzera uye kuderera muchubhu yekunze kuitira kuti prop yesimbi igadzirike.Inogonawo kugadziriswa maererano nehurefu hunodiwa.
4) Iyo simbi yesimbi inogona kushandiswa zvakare.Kunyange zvazvo isiri kushanda, zvinhu zvacho zvinogona kushandiswazve.
5) Steel prop inogona kugadziriswa zvichienderana nehupamhi hwakasiyana pazvivakwa.
Scaffolding simbi prop ine yakakwirira kutakura mutoro, inoshandiswa zvakanyanya muzvivakwa zvakawanda zvekuvaka.